လာပျေါတာဟာ မတျလ ( ၇ ) ရကျ ၊ တနင်ျဂနှနေေ့ ရှေးကောကျပှဲအပွီးမှာ ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ ဥက်ကဌသဈ ဖွဈလာပါတယျ။ အသငျးအဖှဲ့ဝငျ ( ၅၅ , ၆၁၁ ) ဦးက မဲပေးရှေးခယျြခဲ့ကွပွီး လာပျေါတာက ထောကျခံမဲ ( ၅၄ . ၃ ) ရာခိုငျနှုနျး ရရှိခဲ့ပွီး ပွိုငျဘကျတှဖွေဈတဲ့ ဖောငျ့က ( ၃၀ ) ရာခိုငျနှုနျး နှငျ့ Freixa က ( ၉ ) ရာခိုငျနှုနျး ပိုငျဆိုငျခဲ့ပါတယျ။
လာပျေါတာဟာ ( ၂၀၀၃ ) ခုနှဈမှာ ဘာစီလိုနာအသငျး ဥက်ကဌအဖွဈ တာဝနျယူခဲ့ဖူးပွီး ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးအသငျးအဖွဈ တညျဆောကျခဲ့ပွီးနောကျ ( ၇ ) နှဈအကွာမှာ အနားယူခဲ့ပါတယျ။ နညျးပွ ပကျဂှာဒီယိုလာ ၊အငျနီယစေတာ ၊ ဇာဗီ ၊ လီယှနျနယျ မကျဆီတို့နဲ့အတူ ဘောလုံးလောကရဲ့ အအောငျမွငျဆုံးအသငျးတဈသငျးကို တညျဆောကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ လာပျေါတာဟ အသငျးရဲ့ လာမာစီယာ အကယျဒမီကနေ ကစားသမားကောငျးတှမြေားစှာ မှေးထုတျပေးနိုငျခဲ့သလို နာမညျကွီး ဂန်တဝငျကစားသမားတှကေိုလညျး ချေါယူပေးခဲ့ပါတယျ။ ( ၂၀၁၀ ) နှရောသီမှာ တိုကျစဈမှူး ဒေးဗဈဗီလာကို ဗလငျစီယာ အသငျးကနေ ယူရို သနျး ( ၄၀ ) နဲ့ ချေါယူနိုငျခဲ့ပွီး ( ၂၀၀၈ ) ခုနှဈမှာ ညာနောကျခံကစားသမားဖွဈတဲ့ ဒနျနီ အဲဗတျကို ဆီဗီလာအသငျးကနေ ချေါယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။
အဲ့ဒီနောကျ ( ၂၀၀၈ ) ခုနှဈမှာပဲ လာပျေါဟာ ဘာစီလိုနာလူငယျကစားသမာဟောငျး တဈဦးဖွဈတဲ့ ဂြာရတျပီကေးကို မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျအသငျးထံကနေ ပွနျလညျ ချေါယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ( ၂၀၀၇ ) ခုနှဈ ဇှနျလမှာတော့ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ တိုကျစဈမှူးကွီး အှနျနရီကို ချေါယူနိုငျခဲ့ပွီး ( ၂၀၀၄ ) ခုနှဈမှာတော့ ကငျမရှနျး ဂန်တဝငျကစားသမား အီတူးကို မာလော့ကာ အသငျးကနေ ချေါယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။
အီတူးဟာ ( ၂၀၀၃ ) ခုနှဈမှာ ဘာစီလိုနာအသငျးထံ ပွောငျးရှလေ့ာတဲ့ ဘရာဇီးတိုကျစဈမှူး ‌ရျောနယျဒငျဟိုနဲ့ အတူ ( ၂၀၀၆ ) ခနျြပီယံလိဂျဖလား ရယူနိုငျခဲ့ပွီး ( ၂၀၀၉ ) ခုနှဈမှာတော့ မကျဆီ ၊ အှနျနရီ တို့နဲ့အတူ ခနျြပီယံလိဂျဆုဖလားကို ထပျမံရရှိခဲ့ပါတယျ။
( ၂၀၀၉ ) ခုနှဈနှရောသီမှာတော့ ဇလာတနျအီဗရာဟီမိုဗဈကို အငျတာမီလနျအသငျးကနေ ကမ်ဘာ့စံခြိနျတငျ ပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ ချေါယူနိုငျခဲ့ပွီး ( ၂၀၀၄ ) ခုနှဈမှာလညျး ပျေါတူဂီ တိုကျစဈမှူး ဒကေိုကို ပျေါတိုအသငျးကနေ ချေါယူပေးခဲပါတယျ။
ဘာစီလိုနာအတွက် လာပေါ်တာ ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ ဂန္တဝင်ကစားသမားများ
လာပေါ်တာဟာ မတ်လ ( ၇ ) ရက် ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ ဥက္ကဌသစ် ဖြစ်လာပါတယ်။ အသင်းအဖွဲ့ဝင် ( ၅၅ , ၆၁၁ ) ဦးက မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီး လာပေါ်တာက ထောက်ခံမဲ ( ၅၄ . ၃ ) ရာခိုင်နှုန်း ရရှိခဲ့ပြီး ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့ ဖောင့်က ( ၃၀ ) ရာခိုင်နှုန်း နှင့် Freixa က ( ၉ ) ရာခိုင်နှုန်း ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။
လာပေါ်တာဟာ ( ၂၀၀၃ ) ခုနှစ်မှာ ဘာစီလိုနာအသင်း ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ဖူးပြီး ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအသင်းအဖြစ် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးနောက် ( ၇ ) နှစ်အကြာမှာ အနားယူခဲ့ပါတယ်။ နည်းပြ ပက်ဂွာဒီယိုလာ ၊အင်နီယေစတာ ၊ ဇာဗီ ၊ လီယွန်နယ် မက်ဆီတို့နဲ့အတူ ဘောလုံးလောကရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးအသင်းတစ်သင်းကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လာပေါ်တာဟ အသင်းရဲ့ လာမာစီယာ အကယ်ဒမီကနေ ကစားသမားကောင်းတွေများစွာ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့သလို နာမည်ကြီး ဂန္တဝင်ကစားသမားတွေကိုလည်း ခေါ်ယူပေးခဲ့ပါတယ်။ ( ၂၀၁၀ ) နွေရာသီမှာ တိုက်စစ်မှူး ဒေးဗစ်ဗီလာကို ဗလင်စီယာ အသင်းကနေ ယူရို သန်း ( ၄၀ ) နဲ့ ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီး ( ၂၀၀၈ ) ခုနှစ်မှာ ညာနောက်ခံကစားသမားဖြစ်တဲ့ ဒန်နီ အဲဗတ်ကို ဆီဗီလာအသင်းကနေ ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက် ( ၂၀၀၈ ) ခုနှစ်မှာပဲ လာပေါ်ဟာ ဘာစီလိုနာလူငယ်ကစားသမာဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဂျာရတ်ပီကေးကို မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းထံကနေ ပြန်လည် ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ( ၂၀၀၇ ) ခုနှစ် ဇွန်လမှာတော့ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူးကြီး အွန်နရီကို ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီး ( ၂၀၀၄ ) ခုနှစ်မှာတော့ ကင်မရွန်း ဂန္တဝင်ကစားသမား အီတူးကို မာလော့ကာ အသင်းကနေ ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အီတူးဟာ ( ၂၀၀၃ ) ခုနှစ်မှာ ဘာစီလိုနာအသင်းထံ ပြောင်းရွေ့လာတဲ့ ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှူး ‌ရော်နယ်ဒင်ဟိုနဲ့ အတူ ( ၂၀၀၆ ) ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး ( ၂၀၀၉ ) ခုနှစ်မှာတော့ မက်ဆီ ၊ အွန်နရီ တို့နဲ့အတူ ချန်ပီယံလိဂ်ဆုဖလားကို ထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။ ( ၂၀၀၉ ) ခုနှစ်နွေရာသီမှာတော့ ဇလာတန်အီဗရာဟီမိုဗစ်ကို အင်တာမီလန်အသင်းကနေ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင် ပြောင်းရွေ့ကြေးနဲ့ ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီး ( ၂၀၀၄ ) ခုနှစ်မှာလည်း ပေါ်တူဂီ တိုက်စစ်မှူး ဒေကိုကို ပေါ်တိုအသင်းကနေ ခေါ်ယူပေးခဲပါတယ်။
ယူနိုကျတကျကို စှနျ့ခှာမှ ခွစှေမျးပိုကောငျးလာတဲ့ လငျဂတျ